Buka u-Sheen-Professional Umkhiqizi we-Zoom Block Camera - Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Ukukhiqiza Imojuli Yekhamera Yebanga Elide Yokusondeza
Sineminyaka engaphezu Kwengu-10+ Sondeza Vimba Ikhamera Experence
I-Hangzhou View Sheen Technology Co., Ltd. iyimboni ehamba phambiliikhamera ye-zoom blockumhlinzeki.Umgomo wethu uwukuba umphakeli ohamba phambili emhlabeniimojuli yekhamera yokusondeza yebanga elide.
I-View Sheen Technology yasungulwa ngo-2016 futhi yathola isitifiketi sebhizinisi kazwelonke lobuchwepheshe obuphezulu ngo-2018. Abasebenzi abayinhloko be-R&D bavela emabhizinisini aziwayo embonini, futhi isipiliyoni sabo esimaphakathi singaphezu kweminyaka eyi-10.
Buka i-Sheen Technology ithuthukisa ubuchwepheshe obuyisisekelo bombhalo wekhodi olalelwayo nevidiyo, ukucubungula izithombe zevidiyo, ukulawula imoto.Ulayini womkhiqizo uhlanganisa lonke uchungechunge lwemikhiqizo esukela ku-3x kuya ku-90x, i-Full HD kuya ku-Ultra HD, ukusondeza kobubanzi obujwayelekile kuya ku-ultra long range zoom, futhi udlulela kumamojula wenethiwekhi ashisayo, asetshenziswa kakhulu ku-UAV, ukugadwa nokuvikeleka, umlilo, ukusesha. nokuhlenga, ukuzulazula olwandle nasemhlabeni, nezinye izinhlelo zokusebenza zemboni.Inqwaba yemikhiqizo nobuchwepheshe ithole amalungelo obunikazi kazwelonke namalungelo okushicilela esoftware, futhi inemvume ye-CE, FCC kanye ne-RoHS.
Imikhiqizo ye-Buka i-Sheen Technology inikeza isethi ehlukahlukene yezimakethe eziqondile ezimboza amazwe angaphezu kwama-20 namakhasimende angaphezu kwe-100.Sinethimba elichwepheshile lokusekela lobuchwepheshe ukuqinisekisa izimpendulo ezisheshayo kuzidingo zozakwethu.
Ngakho-ke, inkampani inikeza isevisi ye-OEM ne-ODM yobungcweti ukuhlangabezana nezidingo zemakethe ezihlukahlukene.Eminyakeni embalwa edlule, i-View Sheen ijulise ulwazi lwayo nolwazi ekuhlangabezaneni nezidingo zamakhasimende ezimakethe ezihlukahlukene eziqondile.
1. Ithimba lochwepheshe: Amalungu eqembu le-R & D abalulekile avela emabhizinisini aziwayo, anesilinganiso seminyaka eyi-10 yesipiliyoni se-R&D.Sinenqwaba ejulile ku-algorithm ye-AF, ukucutshungulwa kwesithombe sevidiyo, ukudluliswa kwenethiwekhi, ukubhala ngekhodi kwevidiyo, ukulawula ikhwalithi, njll.
2. Ukugxila: Kuhileleke ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ukukhiqizwa kwamakhamera wokusondeza isikhathi esingaphezu kweminyaka eyi-10.
3.Comprehensive: Ulayini womkhiqizo uhlanganisa lonke uchungechunge lwemikhiqizo esukela ku-3x kuya ku-90x, 1080P kuya ku-4K, ukusondeza kobubanzi obujwayelekile kuya kububanzi obude bokusondeza kufika ku-1200mm.
4. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi: Inqubo yokukhiqiza esezingeni futhi ephelele kanye nokulawulwa kwekhwalithi kuqinisekisa ukwethembeka komkhiqizo.
Imojuli Yekhamera Yokusondeza Kwenethiwekhi Ikhamera yezinga lokushisa 30x Zoom Camera Mdule Ikhamera yokusondeza enkulu kakhulu Ikhamera yokusondeza ende imojuli yekhamera yokusondeza